Gabdhaha Zebra Cajiib Ah Oo Lagu Daah Furayo Shinbiraha Ka Dambeeya Heesta ⋆ Wararka: Farshaxanka, Safarka, Naqshadeynta, Teknolojiyada
Arbacada, December 2, 2020
Zebra ayaa si qurux badan u dhameeyay daah furida shimbirta ka dambeysa heesta
Daraasadu waxay ogaatay in digaagga zebra ay leeyihiin xusuus maqal sare. (Sawirka waxaa iska leh Frederic Theunissen)
Haddii shimbiraha heesuhu u muuqdaan "Sheeko la yaab leh”Tartamayaasha dhabta ah ee TV-ga, zebra finches ayaa shaki la’aan xadin doonta waqtigaan. Taasi waa natiijada ay si dhakhso leh u xafidi doonaan dhawaaqyada saxiixa ugu yaraan 50 xubnood oo gebi ahaanba ka duwan kuwii adhigooda ahaa, iyagoo lafa guraya falanqaynta cusub ee ka socota UC Berkeley.
Natiijooyinka ayaa si fudud loogu muujiyay joornaalka Hormarinta Sayniskas, shimbirahaas buuqoodu badan yahay ee casaanka leh, oo badanaa loo yaqaan 'zebra finches', ayaa la caddeeyey inay midba midka kale ka dhex dooranayo dad badan (ama adhi) oo ku saleysan inta badan heesaha xulashada gaarka ah ama magaca xiriirka.
Sida dadka isla markaaba ogeysiin kara saaxiibka wanaagsan ama qaraabada ah ee ku weydiinaya codka qofka gaar ah, digaaga dameerleydu waxay leeyihiin awood bini aadam oo ku dhow khariidaynta luqadda. Intaa waxaa sii dheer, waxay maanka ku hayn doonaan midba midka kale dhawaaqiisa kala duwan ee bilaha iyo laga yaabee inuu sii dheeraado, natiijooyinka ayaa kugula talinaya.
"Xusuusta maqalka cajiibka ah ee finanka digaagdu waxay muujineysaa in maskaxda shimbiraha ay aad ugu habboon yihiin isgaarsiinta bulshada ee casriga ah," ayuu yiri abuure hogaamiyaha Frederic Theunissen, oo ah borofisar ka tirsan UC Berkeley oo ku takhasusay cilmu-nafsiga, is-dhexgalka iyo bayoolajiga.
Theunissen iyo cilmi baarayaasha kale waxay rabeen inay cabiraan baaxada iyo baaxada micnaha finalka 'zebra finches' si ay u go'aamiyaan asxaabtooda baalasha leh oo inta badan salka ku haysa codkooda keli ah. Natiijo ahaan, waxay ogaadeen in shimbiraha, oo wada socda markasta, ay fuliyaan xitaa ka sarreeyaan sidii la filayay.
Xayawaanka, awoodda lagu aqoonsado ilaha iyo macnaha wicitaanka xubinta koox-kooxeed waxay u baahan tahay xirfado khariidadeyn adag, tanina waa wax digaagga zebra si cad u bartay, ”Theunissen ayaa xusay.
Hormuudka baaritaanka shimbiraha iyo isgaarsiinta maqalka aadanaha ugu yaraan 20 sano, Theunissen wuxuu helay soo jiidasho iyo bogaadin ku aaddan awoodaha isgaarsiinta ee dameerleyda isagoo adeegsanaya wadashaqeyntiisa UCdo Berkeley oo ah takhtar ku takhasusay cilmiga neerfaha iyo cilmu-nafsiga oo bartay finchi digaagga kaymaha dalkooda Australia. Wadashaqeyntoodii waa la tanaasulay natiijooyinka dhulka ka soo baxa oo ku saabsan awooda isgaarsiinta ee geesaha geesaha.
Xayawaanka loo yaqaan 'Zebra finches' waxay inta badan ku wareegaan deegaano konton ilaa 100 shimbiro ah, dhinac bay u duulaan ka dib taas oo mar kale si wada jir ah u soo noqota. Heesahoodu mararka qaarkood waxay isugu yeerayaan wicitaanno, halka masaafadooda ama wicitaannada xiriirkooda loo adeegsado in lagu go'aamiyo goobta ay joogaan, ama in la is helo.
Waxay leeyihiin waxa aan ugu yeerno bulshada 'fiyuus fission', halkaasoo ay ku kala tageen kadibna ay isugu soo laabtaan, "Theunissen ayaa sidaas tiri. “Ma rabaan inay kaxeeyaan adhiga, sidaa darteed, haddii midkood lumo, waxay ku dhawaaqi karaan 'haye, Ted, waan joognaa halkan.' Ama, haddii midkood fadhiyo buul iyada oo midka kalena uu wax quudinayo, ayaa laga yaabaa inuu u yeero inuu weydiiyo inay nabad tahay inuu ku laabto buulka. ”
Maalmahan, Theunissen wuxuu hayaa kaliya dhowr dersin finch ah oo ku yaal aviaries xerada iyo wareega, 20 ka mid ah ayaa loo isticmaalay tijaabadan cusub.
Sida ay u sameeyeen baaritaanka
Tijaabo laba qaybood ah, 20 digaag dameer maxbuus ah ayaa la baray inay kala saaraan shimbiraha gabi ahaanba ka duwan iyo codkooda. Markii hore, kalabar shimbiraha ayaa lagu baaray xafidida heesaha, halka kala badhna lagu qiimeeyay masaafada ama wicitaanada lala xiriirayo. Kadib waxay wareejiyeen waajibaadyadan.
Marka xigta, digaagga digaagga ayaa la dhigay, midba mar, gudaha qolka oo lagu dhagaystay codadka oo qayb ka ah nidaamka abaalmarinta. Ujeeddada ayaa ahayd in lagu tababaro inay ka jawaabaan ganaaxyo gaar ah oo loo yaqaan 'zebra' iyadoo la dhageysanayo tiro ka mid ah gabi ahaanba kala duwanaanta codadka shimbirahaas codkooda gaarka ah iyo xifdintooda.
Adoo furey furaha qolka dhexdiisa, mowduucyada shimbiraha waxay keeneen duubis maqal ah oo ku saabsan codbixinta 'zebra finch vocalization'. Hadday sugaan ilaa ay ka dhammaanayaan duubista lixda ilbiriqsi, oo ay ka mid ahayd kooxda abaalmarinta, waxay heleen shimbiraha. Haddii ay wax ka fureen ka hor intii duubistu dhammaatay, waxay u wareegeen duubitaankii xigay. Inbadan oo tijaabooyin ah, waxay ogaadeen cod-bixiyadee soo saari doonta shimbiraha, iyo midkee laga boodi doono.
Marka xigta, digaagga digaagga ayaa loo bilaabay cajalado dheeri ah oo dheeri ah oo laga soo duubay xayawaanka cusub ee digaagga, si loo tuso inay u kala soocaan codadka codadka leh ee shimbiruhu lahaayeen. Waxay si dhakhso leh u garteen inay kala soocaan 16 gebi ahaanba dameerro dameerro kala duwan.
Xaqiiqdii, digaagga digaagga, mid kasta oo dheddig iyo lab ah, ayaa si wax ku ool ah loogu qaaday imtixaannada oo 4 ka mid ah ay heleen geeddi-socodkii ugu adkaa ee lagu kala saarayo 56 gebi ahaanba dameerro gebi ahaanba ka duwan. Caadi ahaan, waxay ku guuleysteen inay aqoonsadaan 42 gebi ahaanba dameerro gebi ahaanba ka duwan, oo ku saleysan inta badan codadka saxiixooda. Intaa waxaa dheer, iyagu si kastaba ha ahaatee waxay kujireen meel ay ku go'aansadaan shimbiraha inta badan ku saleysan codkooda dhawaaqa bil kadib.
"Runtii aad baan ula dhacay awoodaha xusuusta cajiibka ah ee ay leeyihiin geesaha duurjoogta ah si ay u fasiraan wicitaanada isgaarsiinta," Theunissen ayaa xusay. “Cilmi baaris hore ayaa muujisay in shimbiraha heesaha ay awood u leeyihiin inay adeegsadaan qaab fudud oo ay ku abuuri karaan macno adag iyo in noocyo badan oo shimbiro ah, hees lagu barto ku dayasho. Hadda way cadahay in maskaxda heesaha ay ku xiran tahay xiriir cod.
Marka laga soo tago Theunissen, wada-qorayaasha baaritaanka waa Kevin Yu iyo Willam Wood oo ka tirsan UC Berkeley.
Akhriso warbixinta oo dhan gudaha Horumarka Sayniska
article PreviousKelitaanka Ardayga ee KWASU | Eeg Sida Loogu Soo Gello kwasu.edu.ng
Next article10 dhacdo oo cadeynaya Dexter wuxuu ahaa wax ka badan dhamaad xun
Blog | Soo iibsiga: Waraaqaha waraaqaha ee Robert Pincus-Witten